Nezvedu | Wenzhou Hawai Electron & Magetsi Kugadzira Co., Ltd.
Wenzhou Hawai Electron & Electric kugadzira Co., Ltd. inozivikanwawo seYUANKY yakatangwa muna 1989 YUANKY ine vashandi vanopfuura 1000, inovhara nzvimbo inopfuura 65000 mativi emamirimita. Tine yedu yekugadzira yazvino mitsara uye yakakwira kudzora michina nesainzi manejimendi, nyanzvi mainjiniya, epamusoro akadzidziswa mahunyanzvi uye vane hunyanzvi vashandi. YUANKY inosanganisa R & D, kugadzirwa, kutengesa, uye sevhisi kugadzira yakazara yemagetsi nemagetsi mhinduro.
YUANKY inosimbiswa ne ISO9001: 2008 uye ISO14000 TUV Quality Management System. Isu tinopa ese ese zvitupa zvekuyedza, senge Chigadzirwa chitupa, fekitori yekuongorora mushumo, yakakwira voltage tsvagurudzo bvunzo mushumo, wechitatu-bato bvunzo bvunzo, kubhidha qualification etc.
YUANKY inonyanya kuburitsa redunhu mudariki, fiyuzi, contactor & relay, socket & switch, kugovera bhokisi, kuwedzera vanosungwa etc. zvigadzirwa zvedu zvinosangana nenyika zviyero uye indasitiri zviyero. Tine zvitupa zvezvinhu zvedu zvinopisa zvinotengesa, senge CB, SAA, CE, SEMKO, UL zvitupa nezvimwe isu tine seti yakazara yevaedzo uye zvese zvigadzirwa zvedu zvichaedzwa tisati tasiya fekitori yedu. YUANKY yatengesa zvigadzirwa kune anopfuura zana nyika kutenderera pasirese uye zvishoma nezvishoma iri kuwana mukurumbira mune zvese mhando uye kuvimbika.
Iyo 21st century inguva izere nematambudziko nemikana, Isu vanhu veYUANKY ticharamba tichizvivandudza isu nekuzvikunda isu kutarisana nemakwikwi anotyisa nekuvimba kwedu kwese uye nekushanda nesimba. YUANKY vanhu vari kuchengeta huzivi hwe "kutendeseka sedhorobha, mhando yekurarama, hunyanzvi hwebudiriro". Isu tinoomerera pane yekutanga-kirasi chigadzirwa chemhando uye yekutanga-kirasi mushure-yekutengesa sevhisi kukudziridza pamwe nenyika indasitiri. Hupfumi hwepamusika kupona kwevakanyanya, zvakafanana nekukwasva chikepe kumusoro, kwete kumberi ndiko kudonha kumashure. YUANKY vanhu vanotarisira nemoyo wese kushandira pamwe nevekunze uye vekunze vatengi vane hwakavimbika mhando, yemakwikwi mutengo uye yepamusoro sevhisi
Ngatitarisei kumberi kune ramangwana! Ngatishandei pamwe chete uye tivake kuhwina-kuhwina bhizinesi hukama! Tinoshuvira kwazvo kugadzira ramangwana rakajeka newe!